Taageerayaasha Arsenal oo si wayn uga careysan RIKOODHKAN foosha xun ee u yaala kooxdooda – Gool FM
Taageerayaasha Arsenal oo si wayn uga careysan RIKOODHKAN foosha xun ee u yaala kooxdooda
Byare December 21, 2016
(London) 21 Dis 2016. Taageerayaasha Arsenal ayaa aad uga carreysan Rikoodhka sida aadka ah u liita ay kooxdoodu ka heysato 6-da kooxood ee ugu sarreeya Premier League marka ay garoomadooda kula soo ciyaarto.
Guul daradii ugu dambeysay Arsenal ayaa ka soo gaartay gegada Etihad Stadium oo waxaa 2-1 ku soo dubtay Man City iyadoo xitaa goolka la hormartay ciyaarta.
Sky Sports ayaa qallinka u qaadatay oo soo saartay rikoodhka xun ay Arsenal ka heysato kooxaha waa wayn ee Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham, iyo Manchester United marka ay martida u tahay ama ay kula soo ciyaareyso garoomadooda.
21-kii kulan ee ugu dambeysay ay Gunners la soo ciyaartay kooxahan hal jeer xitaa kama adkaan, waxay bar-baro soo gashay 7-kulan halka 14-jeerna laga soo adkaaday.
Taa ayaa la micno ah in wiilasha Wenger ay 7-dhibcood oo qura kala soo hoydeen meel laga doonayay 63-dhibcood, waa rikoodh ay u baahan tahay inay iska hagaajiso haddii ay dooneyso inay ka baxdo abaarta ka heysata inay ku guuleysato horyaalka Premier League muddo dheer kaddib.
Kooxda ugu fiican Premier League ilaa iminka oo la soo saaray…(Man United iyo Liverpool oo midna ku lahayn)
Arsene Wenger oo ku dhaw inuu heshiis cusub u saxiixo Arsenal